Ma Sidanaa U Dambaysay? Barcelona Oo U Hanjabtay Xiddiga Shaqada Badan Usoo Qabtay Ee Luis Suarez & Waxa Ay U Sheegeen - Gool24.Net
Ma Sidanaa U Dambaysay? Barcelona Oo U Hanjabtay Xiddiga Shaqada Badan Usoo Qabtay Ee Luis Suarez & Waxa Ay U Sheegeen
Kooxda Barcelona ayaa lagu soo warramayaa inay u hanjabtay weeraryahanka mudada lixda sano ah lasoo qaatay ee Luis Suarez kaas oo mustaqbalkiisa kooxdaasi yahay mid madaw ku jiro tan iyo magacaabistii macalin Ronald Koeman.
Ronald Koeman ayaa xiddiga ree Uruguay u arka mid dheeraad ku ah waxa uu uga baahan yahay Camp Nou isaga oo mudo kahor u sheegay inuu koox cusub raadsado.
Luis Suarez ayuu heshiiskiisa Barcelona ka hadhsan yahay hal sano waxaana la sheegayaa inuusan doonayn in qandaraaska uu kula jiro uu si lacag la’aan ah ku kansalo balse uu doonayo in haddii la kansalo mushaharkii uu qaadan lahaa mudadaas la siiyo.
Tan iyo markii lagu soo laabtay tababarka ka horreeya xilli ciyaareedka, Suarez ayaa la sheegayaa inuu yahay mid diirada saaraya Barcelona isla markaana soo dhawayn doona haddii uu Koeman ka laabto go’aanka uu kooxda kaga dirayo.
Wakhti xaadirkan, in Koeman go’aankiisa ka noqdo ayaa u muuqata mid aan suurogal ahayn maadaama oo uu ka reebay liiska xiddigaha kooxda ee kulankii saaxiibtinimo ee Gimnastic ay la yeesheen.
Wargeyska Sport ayaa sheegaya in Suarez uu ahaa mid ku tababaranayay meel ka baxsan xiddigaha kale ee kooxdiisa isla markaana uu kulankii Gimnatsic kasoo daawanayay gurigiisa.
In badan oo xagaagan kamid ah, Luisito ayaa lala xidhiidhinayay dhinaca Juventus iyadoo ay warar laga helayay Talyaanigu sheegayeen inuu ku dhaw yahay Juve.
Sport ayaa haatan sheegaya in heshiiskii uu Suarez ugu wareegayay Juventus uu hadda xaalad gaabis ah galay oo uu hakaday.
Barcelona ayaa ugu hanjabtay sida ay warbixintu intaas ku darayso in uu qaybta sarre ee Camp Nou kasoo daawan doono kulamada kooxda ee xilli ciyaareedka dambe oo aan la xulan doonin haddii uu ku adkaysto inuu sii joogo.
Cabdurahmaan Siciid says:
Wax macquul ah maaha suarez Naadiga haduu saas i xumeeyey ha iskaga tago
Barcelona waa bilaa abaal haday saas ula dhaqantay mid kamida halyeeyadeeda luis suares